Axmed Madoobe iyo AMISOM oo ka wadahadlay dagaalka Al-Shabaab. - Wargeyska Faafiye
Axmed Madoobe iyo AMISOM oo ka wadahadlay dagaalka Al-Shabaab.
Saraakiisha ciidanka AMISOM ee ku sugan degmada Kismaayo iyo hoggaamiyaha maamulka KMG ah ee Jubba, Axmed Maxamed Islaam (Madoobe) ayaa ka wadahadlay dardargelinta howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab.
Axmed Madoobe oo warbaahinta kula hadlay Kismaayo ayaa sheegay in la gaaray xilligi kama dambeysta ahaa ee Al-Shabaab laga saari lahaa dhammaan deegaannada uu ka taliyo maamulkiisa, ayna diyaariyeen ciidankii howlgalladaas fulin lahaa.
Madaxa howlgalka ciidanka AMISOM ee Kismaayo Jeneral Aliyow Gambe ayaa dhankiisa soo dhaweeyay in la sameeyo howlgal Al-Shabaab looga saarayo Jubbooyinka.
Gambe ayaa bulshada ka codsaday in ay taageeraan howlgalka ka dhanka ah Al-Shabaab, isagoo xusay in awooddii kooxda la wiiqay dhowaanna la ciribtiri doono.
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsAfhayeen loo magacaabay m/Banaadir.Go’aan Deg deg ah oo Kasoo Baxay Gudoomiyaha Baarlamaanka SoomaaliyaMuqdisho Oo Maanta Looga Ciidayo Si Ka Duwan Ciidihii Hore.Clinton oo guuldaradeeda ku eedeysay madaxa FBI-da James Comey.A/Sunna: Labo qof oo la qisaasay